I-25 YEDROP FADE YOKUCHEBA IINWELE ZAMADODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
Eyona Iinwele Zamadoda I-25 yeDrop Fade yokucheba iinwele
I-drop fade iyinwele ethandwayo yamadoda enika i-twist ekhethekileyo kwi-classic taper fade. Indawo yokucheba iinwele iluhlobo lokuphelelwa lujikeleza ...
I-drop fade iyinwele ethandwayo yamadoda enika i-twist ekhethekileyo kwi-classic taper fade. I-drop fade haircut luhlobo lokuphela olujikeleze indlebe kwaye yehle iye kwi-nape yentamo yesitayile esibi. Unokukhetha ukusuka kwindawo ephezulu, embindini, nasezantsi ukuze ufumane iinwele ezifanelekileyo kwiimfuno zakho. Nokuba ufuna ishishini lobuchwephesha elinje ngekama ngaphezulu okanye ukunqunyulwa okuncinci kokucheba ngeenwele ezigobileyo, le fade yokucheba iinwele ingathatha isitayile sakho ukuya kwinqanaba elilandelayo.
Amanye amadoda aya kufuna i-taper ephantsi yokulahla iinwele ezimfutshane ngenkangeleko yeklasi, ngelixa abanye benokuthi bathande ukuhla kwebala eliphakathi kunye neenwele ezinde ngaphezulu ukwenza isitayile esipholileyo ngokwahlukileyo. Abafana banokudibanisa ukuphela kwethambo kunye neenwele ezimfutshane kunye nezide, kubandakanya ikama ngaphezulu, isityalo ngaphezulu, icala ecaleni, ukubuyela umva, mohawk, kunye nepompadour. Ngokusikwa okuninzi okunesitayile kunye nezitayile, kunokuba nzima ukukhetha i-fade fade haircut eya kujongeka intle kunye neenwele zakho.
Ukukukhuthaza ngezimvo, siqokelele uluhlu lweyona ndawo ifanelekileyo yokulahla iinwele ukuzama okwangoku! Ukusuka kwiinwele ezimfutshane ukuya kwezinde kunye nesikhumba sokufota, jonga i-v-fade cut ukuze ufumane iinwele ezithandwayo zamadoda oza kuzithanda!
1Yintoni iDrop Fade?
MbiniUlahle iinwele eziPhelileyo
2.1Ukuhla kweLow Fade
2.2Phakathi kweDrop Fade
2.4I-Bald Drop Fade
2.5Ukulahla iTaper Fade
2.6Ulusu lweDrop Fade
2.7Ukulahla ukuphela kweFayile
2.8Ulahle Fade ngeenwele ezimfutshane
2.9Ulahle Fade ngeenwele ezinde
2.10Ukulahla ukuphela kwabantu abaMnyama
2.11Iinwele eziGobileyo phezulu kunye neDrop Fade
2.12Ulahle Fade Mohawk
2.13Ulahle uFade Afro ngeeCurly Twists
2.14Yehla iFade yokucheba iinwele ngeV-Shaped Neckline
2.15Ukulahla ukuCima ukuKhanya ngaphezulu
2.16I-Fringe ngeDrop Fade
2.17Ukulahla ukuphela kweenwele ezithunyelwe phezulu
2.18Isivuno siPhezulu esiPhelayo siphelile
3Uyifumana njani indlela yokuLahla iiNwele eziPhelayo
Yintoni iDrop Fade?
Idrop fade luhlobo lwe ukuphela kweenwele ukuba itheyiphu ezantsi ngasemva kunye nasentanyeni ukwenza uyilo oluthile lweenwele. Ngelixa i-classic fade emfutshane inika nokusika okujikeleza yonke indlela ejikeleze intloko kwinqanaba elifanayo, i-taper fade iyagobeka kwaye ilandele inwele entanyeni. Eyaziwa nangokuthi i-v-fade, i-arc-shape ye-drop fade ilandela imo yentloko yendoda kwaye inikezela ngenkangeleko epholileyo.
Unokukhetha ukufumana ukuphela okuphezulu, okuphakathi, okanye okuphantsi okuya kuncedisa iinwele zakho. Abafana banokukhetha inkqayi, ulusu, okanye taper fade iinwele ukulungelelanisa ukusika kwiimfuno zabo. Mkhulu ngefutshane, ubude obuphakathi kunye neenwele ezinde, ithontsi liphela ngababini kakuhle ngekama ngaphezulu, i-quiff, i-top top yezityalo, ukubuyela umva kunye nazo zonke iinwele ezithandwa kakhulu ngamadoda. Ukugqibelela kubafana abaneenwele ezishinyeneyo, ezithe nkqo, ezirhangqayo kunye neenwele ezigobileyo, le fade yokucheba iinwele ilukhetho olulula kodwa oluhle.
Ulahle iinwele eziPhelileyo
Ukuhla kweLow Fade
Ukwehla okuphantsi kukucoceka okusulungekileyo kunye nokujonga okutsha kwezitayile kakuhle kuzo zonke izihlandlo. Iinwele eziphantsi ezilahlekileyo zokucheba iinwele zibonelela ngobuchule kunye nezinwele eziqhelekileyo onokuthi uzinxibe naphina, unika abafana ubhetyebhetye kunye nokukhetha. Ukufezekisa kuzo zonke iintlobo zeenwele, ungacela i-barber yakho ukuba yongeze isikhumba siphele okanye usigcine sintle nge-taper fade. Xa usenza isitayile, iinwele zakho ezimfutshane zinokuba zi-spiky okanye zikhutshwe zifutshane kwaye zitshitshiswe ziye phambili. Ngonwele oluphakathi ukuya kolude, yikama emsebenzini okanye uyiphinde ngeempelaveki. Njengonwele oluchanekileyo, i ukuphela okuphantsi ukusikwa kweklasi kufanelekile ukuqwalaselwa.
Phakathi kweDrop Fade
Ukudakumba okuphakathi kungabonelela ngolonwabo oluphakathi phakathi kwe-edgy kunye neklasi. Ukucheba iinwele okuphakathi okuphakathi kuya kwehla phakathi kwentloko kwaye kujongeka kukhulu kubafana abaninzi. Ungacela umchebi wakho ukuba a ukuphela kwetaper ukwenza ukusika okufutshane kakhulu okanye umxelele ukuba adibanise ukugqitywa kolusu ukuze kupholile impandla iyaphela . Unokudibanisa ukudakumba okuphakathi kunye nekama ngaphezulu, ulayini kunye neendevu ezilungisiweyo kwisitayile sobungcali. Nokuba uyayithanda into emdaka, ispiked, okanye utyibilike umva, i phakathi kokuphela iya kugxininisa iinwele zakho ezinesimbo.
Ukuhla okuphezulu kuphelile kubafana abafuna ukusikwa okufutshane kakhulu okujongeka kunesibindi kunye nokufana. Ukucheba okuphezulu kokucheba kweenwele kubonelela ngenkangeleko emacaleni nasemva, kwaye kugxile ekuqwalaseleni kwizinwele ezinde ngaphezulu. Unokudibanisa ulusu oluphelayo oluphezulu kunye nesityalo esiphakamileyo iinwele ezimfutshane okanye udibanise i-taper ephezulu kunye ifeksi okanye uyeke isitayile esithe kratya. Imfashini enabo bonke ubude, i ukuphela okuphezulu yinqumle enomtsalane ebalaselisa eyakho iinwele ezipholileyo .
I-Bald Drop Fade
I-bald drop fade kukucheba okufutshane kakhulu emacaleni nasemva okujongeka njengokutsha kunye nokuthe tye. Inkqubo ye- impandla iyaphela unokuba sisithuba esisezantsi, esiphakathi okanye esiphakamileyo sokucheba iinwele, kodwa uya kuhlala uthambeka eluswini ukuze usikwe. Ngobuhle obongezelelekileyo kunye nesitayile, yongeza le ncakuba iphele kwisinqe sakho osithandayo.
Ukulahla iTaper Fade
Ukuphela kwetaper tade kunokugqibelela kubafana abangafuni kuveza ulusu oluninzi. Unobunkunkqele kwaye ucocekile, cela i-barber yakho ukuba ilahle i-taper fade ukuba ufuna iinwele zeshishini lobuchwephesha ezinobunewunewu kunye nesitayile. Xa ubhangqiwe ngohlobo lweenwele zodidi, i taper fade iinwele inokunyusa ukujonga kwakho ukwenza ukugqitywa kwendalo iphela.
isixhobo sokubala ngeenkwenkwezi
Ulusu lweDrop Fade
Ukuphela kolusu olukhanyayo lubukeka lucekeceke kwaye luyindoda kunye nazo zonke iinwele ezipholileyo kumadoda. Inkqubo ye- ukucheba ulusu kunqunyulwa okufutshane kakhulu okudibanisa iinwele kwi-scalp, okukhokelela kwisitayile esibi. Nokuba ukhetha ukusikwa okuphezulu, okuphakathi okanye okuphantsi, ulusu oluyekileyo luya kuphelisa iinwele ngaphezulu. Ukudityaniswa ngeendevu kunye nokuma kwayo, ungawabonisa amacala akho aphekwe amafutshane kunye izitayile ezinde Njengokuthe tye, ukujiya kunye iinwele ezinekhelizi . Sebenzisa i-matte ipomade ukufumana indalo, ukugqiba okubhaliweyo.
I-drop fade undercut yinqobo yamadoda yokucheba iinwele ezenza inkangeleko eyodwa. Oku iinwele ezingasasebenziyo ngababini i-taper epholileyo iphela kunye ne-undercut yokongeza omnye ubukhulu kunqumle. Uninzi lwabafana luyathanda ukudibanisa i-undercut drop fade kunye ne-textured iinwele ezibuyile umva Isitayile esiqhelekileyo esikhulisa ukukhanya kwendalo kunye nevolumu.
Ulahle Fade ngeenwele ezimfutshane
Idrop fade isebenza kakuhle nge iinwele ezimfitshane ukwenza isitayile sobudoda. Iinwele ezimfutshane lukhetho oluthandwayo kubafana abafuna i-classical kunye ne-aesthetic epholileyo. Isuka e ukusikwa kwe-buzz ukuya kokubhaliweyo Phezulu kwezityalo , abasebenzi abasikiweyo kunye nenxalenye esecaleni, zininzi iinwele ezinqamlezileyo zokufumana ukuba ufuna i ukugcinwa okuphantsi kunye nokujonga okulula .
Ulahle Fade ngeenwele ezinde
Ukudakumba kungathatha iinwele zakho ezinde ziye kwinqanaba elilandelayo. I-drop fade haircut nge iinwele ezinde ngaphezulu ikunika ubhetyebhetye kwisitayile sonke iinwele zamadoda ezilungileyo . Ukusuka kwikama ukuya kwi-quiff, ipompadour, ipompadour, ukubuyela umva, indoda bun kunye ne-mohawk, zama izitayile zakho ozithandayo ukufumana ukubonakala okufanelekileyo.
Ukulahla ukuphela kwabantu abaMnyama
Idropha iphela amadoda amnyama ijongeka intle nge-afro, ukujija , amaza , mohawk, okanye phezulu phezulu. Ukuba ungumntu omnyama ofuna i-hairstyle entsha kunye nokuthabatha okuyingqayizivele, cela i-barber yakho ukuba i-drop fade haircut ukuze ufumane ukusika okuqhelekileyo. Ukulahla okuphezulu okuphezulu kuyaqhubeka nokuba sisinwele esidumileyo, kodwa oku kunqamka kunomdla kusebenza kakuhle kunye ne-afro yokujonga kwakhona. Amadoda amnyama nawo adibanisa ukulahla okuphelileyo ngokujija kunye namaza ukongeza umtsalane wale mihla. Unokubonisa umda ukuze ufumane crisp, imigca ebukhali okanye uyilo lweenwele ukuze wenze ngokwezifiso amacala aphelileyo.
umva tattoos amadoda
Iinwele eziGobileyo phezulu kunye neDrop Fade
Ukuhla kwethontsi kunokusikwa xa unakho iinwele ezinekhelizi ngaphezulu kwaye inika abafana amandla okuthambisa ii-curls zabo ngesitayile sokugcina esisezantsi. Iyaziwa ngabafana abakwishumi elivisayo kunye namadoda amancinci aqeqeshiweyo, iinwele ezigobileyo ngaphezulu kunye nethontsi eliphelile lokucheba iinwele emacaleni nasemva kukhokelela kwizinwele ezigcwele ivolumu kunye nokuzala. Nokuba ufuna ii-curls ezimfutshane okanye ezinde, ubuqhetseba bokuchaza nokulawula ii-curls zakho usebenzisa ishampu ekumgangatho ophezulu, isilungisi, kunye imveliso yesimbo . Qinisekisa ukuba ii-curls zakho zithanjisiwe kwaye zisempilweni ukunciphisa i-frizz kunye nokwandisa ukubuyela.
Ulahle Fade Mohawk
I-drop fade mohawk yinqwele yamadoda enqabileyo edibanisa izitayile zangoku kunye nezakudala. Ikwabizwa ngokuba yi-South of France yokucheba iinwele, le mohawk yinguqulelo ecekeceke kakhulu yemveli. Idume ngamadoda amnyama, le mohawk iinwele ezinedrop fade ziya kukunceda ume kuso nasiphi na isihlwele.
Ulahle uFade Afro ngeeCurly Twists
Ukuhla kwethontsi kunye nokujija kweenwele zezinwele zale mihla zamadoda amnyama ezikhupha isitayile nokuzithemba. I-drop fade twist haircut iqala ngokucofa amacala amafutshane ukwenza umahluko oyimfuneko kwaye ugqibe ngale ndlela ipholileyo yeenwele ngaphezulu. Ukugqiba ukujonga ngomgca kunye nentshebe.
Yehla iFade yokucheba iinwele ngeV-Shaped Neckline
Idrop fade ihlala ibizwa ngokuba yi-v-fade haircut ngenxa yoyilo olusika emva kwentamo. Inesibindi kwaye intsha, i-v-fade inokongezwa nakweyiphi na i-hairstyle yamadoda kwaye inokusetyenziselwa ukwenza ngokwezifiso ukusika kwethontsi lakho.
Ukulahla ukuCima ukuKhanya ngaphezulu
Ikomityi yokuphela kwekomityi yenye yeefayile ze- ezona zinwele zithandwa kakhulu emadodeni kwaye inokuba yimbonakalo yesitayile eyongeza ivolumu kunye nokuthungwa kweenwele zakho. Inkqubo ye- ikama ngaphezulu Iinwele zodidi oluhle nezinobunewunewu obugqithisileyo obunobunkunkqele, busenza isitayile seshishini esifanelekileyo. Unokubonisa ukwehla okuphantsi okanye okuphakathi kwinqanaba lokuphela emacaleni nasemva ukongeza ubuqaqawuli kwesi siqwenga. Ngokwe-vibe yanamhlanje edies, jonga ulusu okanye i-bald fade cut cut ukudibanisa iinwele kwi-scalp. Ngokucheba iindevu ezigcinwe kakuhle, uya kufuna ukwenza isitayile ikama ngaphezulu kokucheba iinwele ngomelele ipomade ukugqitywa okucekeceke okanye imveliso ekhanyayo yemvelo yendalo, ubuhle bobugcisa.
izitayela zeenwele zamadoda amnyama
I-Fringe ngeDrop Fade
Umphetho unokuba yindlela entle yokudibanisa iinwele ezimfutshane kunye nethontsi eliphelayo. Nokuba ufuna umphetho omde okanye omfutshane, ezi bangs zinokubonelela ngeendlela zokuhombisa kubafana abaneenwele ezishinyeneyo, ezigobileyo kunye ne-wavy. Ubrashiwe ngaphambili kwaye ushiye ulenga ngaphezulu kwebunzi, iinwele ezinemiphetho kunye nokusika okuphelileyo kuya kujongeka kukuhle kubafana abakwishumi elivisayo.
Ukulahla ukuphela kweenwele ezithunyelwe phezulu
Kubafana abakhetha iinwele ezikhululekileyo nezingaqhelekanga, ukuphela kwethontsi kusebenza kakuhle kunye neenwele ezimdaka ngaphezulu. Izitayile zomyalezo ujongeka ulungile kubafana abaneenwele ezingqindilili kunye neenwele ezipeyiziweyo. Ukwenza isitayile sakho siphezulu, sebenzisa ukukhanya ukubamba i-wax okanye udongwe ukuphucula ivolumu kunye nokuzala. Oku kupheliswa kwethontsi okwenziwe ngombala kuya kukufumanela ukujonga ngokungathandabuzekiyo kwebhedi oyifunayo.
Isivuno siPhezulu esiPhelayo siphelile
Inkqubo ye- Isityalo sela phezulu iinwele zamadoda ezipholileyo ezibandakanya amacala aphelileyo kunye neenwele ezimfutshane ngaphezulu. Ikwabizwa ngokuba sisityalo sase-France, ukunqunyulwa kweenwele ezimfutshane yindlela yeenwele yanamhlanje eyavela eYurophu kwaye sele ijongeka ngathi ishushu kwiindawo zokucheba iinwele kwihlabathi liphela. Ngokufana ne abasebenzi abasikiweyo , Isityalo si brashiwe ngaphambili kwaye senziwe isitayile ngemveliso ye-matte yokugqiba okubhaliweyo. Ngelahleko eliphantsi, eliphakathi okanye eliphakamileyo elinciphayo emacaleni nasemva, isitayile esifutshane esithandekayo kulula ukufezekisa.
Uyifumana njani indlela yokuLahla iiNwele eziPhelayo
Ukufumana i-drop fade cut akufuneki idideke kwisitayile sakho, kodwa ukuba umchebi wakho khange eve ngesitayile, qiniseka ukumbonisa umfanekiso ngaphambi kokucheba iinwele zakho. Ngaphandle koko, ukuchaza ukusikwa ngamagama akukwenzi okusesikweni, kwaye ubude kunye nesimbo sokudakumba esiyekileyo osikhangelayo sinokungangqinelani noko kuchetywa ngumchebi wakho.
Zonke izinto ezisikiweyo zifuna isibini esifanelekileyo seenwele kunye nolwazi lokuba ungaphela njani useto olunye lokucoca uluse kolunye. Cela iingcebiso malunga nokuba ukusika okuphelayo kunokwenziwa njani ukuze kulungele imeko yobuso bakho ngcono. Olu hlengahlengiso oluthile luya kuqinisekisa ukuba ufumana iinwele ezilungileyo ehambelana noluvo lwakho lwesimbo.
abasebenzi banqumle akukho kuphelelwa
Ukucheba iinwele kwicala lamadoda
uyilo lweenwele ezizig zag